जनैपुर्णिमामा क्वाटी खाने विचारमा हुनुहुन्छ ? यसरी बनाउनुहोस स्वादिष्ट क्वाटी - कृषि डेली
Home banner जनैपुर्णिमामा क्वाटी खाने विचारमा हुनुहुन्छ ? यसरी बनाउनुहोस स्वादिष्ट क्वाटी
जनैपुर्णिमामा क्वाटी खाने विचारमा हुनुहुन्छ ? यसरी बनाउनुहोस स्वादिष्ट क्वाटी
नेपाली हिन्दुहरुको बिशेष पर्व जनैपुर्णिमा बिहीबार आउँदै छ। जनैपुर्णिमाका दिन बिहान सबेरै उठी जलासयमा गएर स्नान गरी बिधिपुर्बक मंत्रिएको जनै धारन गर्ने चलन छ ।
ब्नतबन्ध गरेका ब्यक्तिले यस् दिन सनातन सभ्यताका बिधी, बिज्ञान, दर्शन र संस्कार र संकृतिको थालअनी गर्ने मंत्र द्रष्टा ॠषीका सम्मनमा तर्पन दिएर यज्ञउपबिध धारन् गर्नेभएकाले यस पर्वलाई ॠषीदर्पनी पनि भनिन्छ । ब्रतबन्ध नगरेका तथा महिलाहरुले भने रक्षाबन्धन (डोरो) धारन गरी मिठा परिकारहरु खाइ मनाइने गर्छन ।
जनैपुर्णिमाका दिन बिशेष गरी क्वाटी खाने चलन पनि रहेको छ । क्वाटी खासगरी नेवारी परिकार भएपनी आजभोलि सम्पूर्ण नेपालीहरुलेनै यस दिन क्वाटीको परिकार खाने गर्दछन । नेवारी भाषामा क्वा भनेको तातो र टि भनेको झोल भन्ने बुझिन्छ ।
क्वाटी बिभिन्न गेडागूडी जस्तै चना, केराउ, भाटमास, बोडी, राजमा, सिमी, बकुल्ला इत्यादी गरी ९ थरीका गेडागूडीलाई टुसा उमारेर पकाइने एक निकै स्वदिस्ट र पौस्टिक परिकार हो ।
क्वाटीलाई तयार पर्ने तरिका :
क्वाटी बनाउनको लागि ४ – ५ दिन अघी देखी नै सुरु हुन्छ । सम्पूर्ण गेडागूडीलाई ४ दिन अघी एउटा सफा भाडामा भिजाउनु पर्नेछ । एक दिनपछी पानी फालेर एउटा जाली भएको भाडा मा राख्नुहोस् । त्यस जाली भएको भाडालाई अर्को एउटा भाडाभित्र राखी एउटा सफा कपडाले चोपी दिनुहोस् ।
यो क्वाटिलाई दिनको दुई पटक पानीले भिजाउदै पानी तर्काउदै राख्नु पर्छ । जाली भएको भाडामा राख्नुको कारण भने दैनिक पानीले पखाल्दा राम्रोसँग पानी सबै तर्कियोस भनेर हो ।
दिनमा दुई पटक यसरी पानीले पखाल्दा क्वाटी बिग्रन पाउदैन र छिट्टै टुसा उम्रन थाल्नेछ । भिजाएको २ दिन जतिमा त्यसमा टुसा पलाउन थाल्नेछ । कम टुसाको लागि २ दिन र लामो टुसाको लागि ४ दिनसम्म यही प्रकृया अपनाइ भिजाइराख्नुहोस् । जब इक्ष्या लागेको लम्बाइको टुसा उम्रिएपछी क्वाटिलाई पकाउनु होस ।
क्वाटी पकाउन चहिने सामाग्रीहरु :
भिजाएको क्वाटी, प्याज, गोलभेडा, ज्वानो, नुन, बेसार, जिरा र धनीयाको धुलो, तेल वा घिउ, तेजपात, खुर्सानी, पिसेको अदुवा र लसून, ल्वाङ सुकमेलको धुलो, हरियो धनीया
क्वाटी पकाउने तरिका :
क्वाटी बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला प्रेसरकुकर ग्यासमा बसाल्नुहोस् । भाडा तातिसकेपछी घिउ अथवा तेल राखेर ज्वानोलाई फुराउनुहोस् अनी तेजपात र काटेको प्याज राख्नुहोस् । प्याज रातो भएपछी पिसेको अदुवा लसुन पनि राखेर एकैछिन भुट्नुहोला र भिजाएको क्वाटी पनि राखी राम्रोसँग चलाई एकैछिन भुट्नुहोस् ।
एकैछिन भुटेपछी बेसार, जिरा र धनीयाको धुलो, खुर्सानी, ल्वाङ सुकमेलको धुलो, नुन राखी एकछिन चलाऊनुहोला र गोलभेडा पनि राखी एकछिन भुट्नुहोला र आफुलाई कती झोल खान मन लाग्छ सोही अनुसार पानी रखेर बिर्को लगाइ ३–४ सिठ्ठी लगाउनुहोला । ३–४ सिठ्ठीपछी बिर्को खोली माथिबाट हरियो धनीया रखी सजानुहोस् र तपाईंको मिठ्ठो क्वाटी खानको लागि तयार भयो ।
Previous articlePicking Out Swift Plans Of RussiansBrides
Next articleNo-Fuss Plans For Russian Brides In The Usa